Ukuphupha nge-Einhorn Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
I-unicorn sisidalwa esiyintsomi esenzeka ikakhulu kwiintsomi zaseYurophu. Ikwavela kwifom eguqulweyo kwiinkcubeko ezingaphandle kweYurophu. I-unicorn yi-hybrid, kuba apha umzimba wehashe elimhlophe kunye nophondo lwebhokhwe ziyahlangana.
I-unicorn ayikho kwinyani yemihla ngemihla. "Indawo yokuhlala" yakho el mundo yefantasy kunye nentelekelelo. Nangona kunjalo, i-unicorn iyaziwa kwihlabathi liphela kwaye ikwajongwa njengesilwanyana esinamandla kwilizwe lomoya.
Kwakhona, i-unicorn inokufumaneka kwindawo yeenkwenkwezi kwaye yaziwa apha ngegama lesiGrike elithi "Monoceros." Nangona kunjalo, ayisiyiyo enye yeenkwenkwezi zakudala, kodwa yafakwa kuphela kwiitshathi zeenkwenkwezi ngo-1624. Ukutolikwa komfanekiso wephupha kule ndawo, uphawu lwephupha "iinkwenkwezi" kufuneka lusetyenziswe.
1 Uphawu lwephupha «i-unicorn» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «i-unicorn» -ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «i-unicorn» -ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «i-unicorn» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, uphawu lwephupha 'i-unicorn' inokusetyenziswa njengophawu lwayo ubumsulwaIsidima kunye nokungazi komntwana kunokutolikwa. Umbono we-unicorn ephupheni uhlala ubhekisa kwizityholo ezibangelwa bubuxoki nobuxoki.
Iphupha malunga ne-unicorn linokubonisa amava anomdla, anokuvela kuhambo olude okanye kubudlelwane bothando. Ngokokuhlalutya ngokubanzi kwamaphupha, nabani na odibana nenyathi ehlathini xa elele angavula amaxesha okonwaba kwaye sijonge phambili kumathuba amahle.
Ukuba umntu oleleyo uvunyelwe ukuba abambe okanye akhwele i-unicorn ephupheni lakhe, uba ngumntu kwihlabathi elivukayo. impiliso yangaphakathi kunye namava ekucoceni. Ukuba ulandela i-unicorn eqinisekileyo ephupheni, uya kuvuzwa ngento elungileyo ekuvuseni ubomi. Kwakhona, umntu oleleyo kufuneka azi ukuba iinzame zakhe ziya kuhlawula ukufikelela kwinqanaba eliphezulu.
Ukuba intombazana okanye omnye umntu uzobe i-unicorn ephupheni, umntu kufuneka agxile kokulungileyo kunye nokuthandekayo. Utshintsho lungisa. I-tattoo ye-unicorn njengomfanekiso wephupha, ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, ibonisa ukuba iphupha kufuneka lixhomekeke ngakumbi kwiimvakalelo zakho. Kuba ezi ziya kukukhokelela kumendo olungileyo.
Uphawu lwephupha «i-unicorn» -ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha kutolika umfanekiso wephupha le-unicorn njengophawu lobunyulu kunye nokuziphatha okuhle. Ikwanokufuzisela ukukwazi ukulungelelanisa izichasi. I-unicorn njengophawu lwephupha inokubhekisa kwi Umgaqo wobufazi yemvelo kunye nomamkeli.
Ngokwe-psychoanalyst Carl Gustav Jung, uphawu "lwe-unicorn" I Umntu ochaphazelekayo kufuneka asondele ngakumbi ebomini bokuvuka. Kodwa akufuneki ungayihoyi inyani nokuba yeyiphi, kuba kungenjalo uzenzakalisa. Ukuba i-unicorn ivela ephupheni njengesikhokelo kubutyebi obufihliweyo, umntu oleleyo ufumana isibonakaliso samandla akhe okomoya okanye aphathekayo, alala kuye.
I-unicorn ene-rainbow mane okanye umsila njengophawu lwephupha olufuna ukuphupha kulo icala loyilo Ukubiza umnxeba. Mhlawumbi uyifihlile le nto kakhulu kubomi bakho bangaphambili. Umbono we-unicorn ezinzulwini zobusuku ngelixa uleleyo ubona ukutolikwa kwephupha njengophawu lokuhlanjululwa ngokwengqondo, ngokweemvakalelo nangokomoya.
Uphawu lwephupha «i-unicorn» -ukutolika kokomoya
Kwinqanaba elidlulayo lohlalutyo lwamaphupha, i-unicorn iquka iphupha ephupheni. uthandoengathethi iimeko okanye izithintelo.